Umbuzo Boeing 787-9
iminyaka 3 4 Sekwedlule amaviki #70 by Leeh12378
Hi Rikooo ithimba ikhona Amathuba noma ngokwenu noma onjiniyela yakho anomthelela kuwebhusayithi yakho emangalisayo, ukudala Boeing 787-9. Bengilokhu ekufuneni eyodwa ubudala, Ngeke nje ngikwazi ukuthola okwamanje. uma ucabanga asathuthuka lokhu izindiza mina ngibe ngowokuqala uyilande.
Qhubeka nomsebenzi omkhulu eniwenzayo.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: regor, danielita
Ngiyabonga wathola: 20
iminyaka 3 4 Sekwedlule amaviki #79 by Gh0stRider203
Vele wabheka futhi angizange ngisibone eyodwa lapha, KODWA Ngizokwenza unake izinto futhi uma omunye pops up lapha, Mina ngizoba ake ya bazi!
Ngiyabonga wathola: 49
iminyaka 3 6 izinsuku ezedlule #211 by Dariussssss
Kungaba ngcono nakakhulu uma besingase sikwazi abe iphakethe 787, nazo zonke izinguqulo 3 endaweni eyodwa. Ngizokwenza alinge ukucela lapha.
iminyaka 3 6 izinsuku ezedlule #216 by JanneAir15
Lokho kungaba umqondo omuhle!
iminyaka 3 6 izinsuku ezedlule #220 by Gh0stRider203
JanneAir15 wabhala: Lokho kungaba umqondo omuhle!
iminyaka 3 6 izinsuku ezedlule #222 by Twicerejected
Mhlawumbe zama ukuthola 787 oyisibonelo kangcono futhi VC alayishiwe
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: danwas
2 iminyaka inyanga 1 edlule - 2 iminyaka inyanga 1 edlule #895 by Josh13215
buyekeza i-787 yamanje ne cockpit yangempela ye-787 esikhundleni se-737? Kanjani ngalokho?
Ukuhlela kokugcina: iminyaka engu-2 inyanga engu-1 edlule Josh13215. Isizathu: iphutha lokugaya